Fomba hafa tsy dia fandre tamin'ireo mpanao politika malagasy no nitondran'ny filoha nasionalin'ny antoko Mfm fanehoan-kevitra teo amin'ny raharaha-pirenena. Tsy ny disadisa ara-politika anatiny toy ny efa nohazavain'ireo mpanao politika rehetra no nitondrany ny resaka fa miankina amin'izao fidiran'ny mpampiasa vola teratany vahiny hitrandraka harena an-kibon'ny tany eto Madagasikara izao.
Nandritra ny tafa tamin'ny mpanao gazety ho famaranana ny fivorian'ny komity foiben'ny MFM ny faran'ny herinandro teo teny Mahaibahoaka-Ivato no nilazany ny heviny. Nahitana ireo mpikambana amin'ny birao foibe miampy ireo mpitarika ny antoko MFM manerana ny faritany.
"Rehefa nipoitra ny fitrandrahana solika, diamondra taty Afrika dia mipoitra ny ady an-trano. Tsy ireo vahiny akory no mitondra miaramila avy any ivelany, fa ireo mpanao politika ao anatiny ihany no vatsiany basy sy vola mba hiady",hoy ny fanazavany. Nitranga izany tany Congo-demokratika, Nigeria ary Soudan...
Ho antsika eto Madagasikara, hofantatra amin'ny volana septambra ny hitrandrahana ny solitany ao Bemolanga ataon'ny orinasa amerikana Exxon-Mobil. Efa nipoitra sahady ny fifandirana ara-politika saingy mbola amin'ny fifamaliana sy resaka am-bava fotsiny ihany no ataon'ny mpanohitra sy ny mpitondra aloha ankehitriny. Tsy mbola tonga amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana sy ny fifamonoana.
Mba hisorohana izany, hoy ny fanazavany dia tsy maintsy atao ny famontsoran-keloka na ny "aministie". Ny olana anefa tsy mety mihaona ny Arema sy ny Tim,ary ny governemanta tsy manaiky mamolavola ny lalàna famontsoran-keloka.
Tsy famontsoran-keloka ho an'ireo voasazy ihany (amnistie des peines) fa ho an'ireo izay tsy mbola voasambotra sy tafiditra amin'ny raharaha (Amnistie de faits et des actes) no ilaina nandritra ireny ady nifanaovana tamin'ny taona 2002 ireny.
Ny filoham-pirenena, hoy Manadafy Rakotonirina efa nanao ny adidiny araka ny fahefana eo ampelan-tanany tamin'ny fanomezana ny famelan-tsazy ( grâce présidentielle)saingy ny governemanta izay manana fahefana hamolavola ny lalàna famelan-tsazy no tsy mbola nanao ny andraikitra tandrify azy.: